Miditra amin’ny herinandro faharoa: tsy hita popoka amin’ny propagandy ireo kandidà sasany | NewsMada
Miditra amin’ny herinandro faharoa: tsy hita popoka amin’ny propagandy ireo kandidà sasany
Sady tsy hihira no tsy hanao tsianjery, amin’izao herinandro faharoa izao. Telo sy efatra ihany amin’ireo kandidà 36 ny hany hita fa tena mihazakazaka amin’ny fampielezan-kevitra, tamin’ny herinandro voalohany.
Tsy hita ny nanjavonan’ireo kandidà sasany. Tsy fantatra, na misedra olana eo amin’ny ho enti-manana, na koa tsy manana tompon’andraikitra misahana ny serasera fa tsy tazana ny maro amin’izy ireny. Tsy heno amin’ny haino aman-jery sady tsy hita any anaty tambajotran-tserasera. Mety misoko mangina any an-tany lavitra andriana koa anefa ny sasany. Ny hafa indray, manezakezaka any amin’ ny faritra niaviany. Ohatra, ny kandidàn’ny PSD, Bezaza Eliana any amin’ny faritra Sofia. Tahaka izany, ny kandidà Ravelonarivo Jean sy ny Aba tarihiny, nanao ny tany Atsimo Atsinanana, tanindrazany. Anisany koa Rajaonary Erick efa nanao tany Fandriana, saingy hatreo ihany.
Ny amiraly Ratsiraka indray, miaraka amin’ny kandidà hafa amin’ny fiara iraisana ny fampielezan-kevitra ataony, saingy tamin’ny fanombohana ihany. Izy aza moa tsy hita fa ny zanany no mitarika izany. Tsy hita intsony anefa avy eo.
Mandany andro amin’ny fitsikerana fitondrana
Ankoatra ireo, mitamba-dratsy mandany andro mitsikera ambony ambany ny lisi-pifidianana ireo vondron’ny kandidà 22. Anisan’ny mitarika izany, i Fanirisoa Ernaivo sy i Tabera Randriamanantsoa ary Ramaroson Arlette. Ny sisa indray, miantehitra amin’ny fandaharana amin’ny TVM/RNM hisehoana fotsiny. Hatreo ihany… fa tsy mihetsika manao propagandy intsony. Ireo mba ambara fa olom-baovao, na teknisianina, tsy hita sy tsy heno…
Amin’ny ankapobeny, tsy mazava ny tian’ny ankamaroan’ireo kandidà hahatongavana amin’izao fifidianana izao. Tsy niomana akory ? Matoa anefa mirotsaka, miandrandra fandresena, na fara faharatsiny, miverina ny vola rehefa mahazo ny 10%. Tsy izany anefa ny maro amin’izy ireo, na efa nandoa anto-bola 50 tapitrisa Ar nirotsahana aza. Ny hafa indray, hivarotra ny mpifidiny, na ny vatony amin’ny volabe miliara amin’ireo kandidà tafiditra fihodinana faharoa. Hanao fanambarana fanohanana koa ny hafa ka sitrany ahay seza iray ho minisitra…
11 ireo helikopteran’ireo kandidà
Etsy andaniny anefa, misongadina ireo kandidà “lehibe” amin’ny hetsika ataony. 11 rahateo ireo angidimbin’ireo kandidà vitsivitsy nahazo alalana hisidina hanao fampielezan-kevitra. Manampy ireo ny fizarana kojakoja samihafa, toy ny tee shirt , ny gazety, ny boky kely , ny saina, ny fehitenda… Eo koa ny hira tsy an-kiato sy ny fanentanana amin’ny haino aman-jery, ankoatra ny fanetsehana eny ifotony ireo mpanohana…
Araka izany, hiavaka sy ho hafa ity fifidianana indray mandeha ity. Na izany aza, mbola misy herinandro efatra, mety hanova zavatra.